Izindaba - The Best Tumbler
Insimbi engagqwali ibhodlela
Ibhodlela lezemidlalo le-PE
Ingilazi & Silicone Bottle
Ingilazi ne-Silicone Tumbler
Umg & Cup
Isingisi Esihamba Phambili
Ngemuva kokushiya ama-tumblers ayi-16 agcwele imigoqo egcwele iSlurpee esihlalweni sangaphambili sedan eshisayo, siyaqiniseka ukuthi iHydro Flask 22-ounce tumbler iyona ehamba phambili kubantu abaningi. Noma sisahlushwa ukushisa okungu-112-degree, sithole inani lokuvikela phakathi kwama-tumblers amaningi ukuze liphumelele (bonke bangagcina isiphuzo sakho sishisa noma sibanda amahora ambalwa). Ukusebenza kweHydro Flask kanye nobuhle kuyenza inqobe.
I-tumbler yethu esiyithandayo yi-Hydro Flask's 22-ounce. Ngokungafani nebhodlela lamanzi noma i-thermos, i-tumbler akuyona eyokuphonsa esikhwameni. Igcina ukushisa namakhaza kuphela inqobo nje uma udinga ukusuka kwenye indawo uye kwenye futhi ikuvumela ukuthi uphuze kalula ngenkathi usendleleni: yisikebhe sokugcina sabagibeli.
Ama-tumbler amahlanu avelele ngesikhathi sivivinya ukubanda kweSlurpee, kanti neHydro Flask yayikulezo ezinhlanu eziphezulu. Futhi kuthathe indawo yesibili esivivinyweni sethu sokugcina ukushisa, esithuthukiswa ngezinga elilodwa lokushisa, ngakho-ke izogcina ikhofi lakho lishisa kalula isikhathi sokuhamba kwakho. Kepha ubuhle bokuthi kungani abantu beyithanda le nto. Sixoxe nabantu abayishumi nambili (noma ngaphezulu) ngesikhathi sedina ngasemlilweni, futhi bonke bavumile ukuthi i-Hydro Flask kulula ukuyibamba futhi ithokozise kakhulu kunanoma imuphi amanye amamodeli ayi-16 esiwabhekile — futhi lokhu bekubaluleke kakhulu kwabazinikelayo. IHydro Flask inesimo esincanyana, nesifiselekayo kunazo zonke izikhubekiso esizibhekile futhi iza nezingubo eziyisishiyagalombili ze-powder ezijabulisayo. Sithanda lezo kune-plain tumbler-steel tumbler, ngoba lezo zishisa ngokungakhululekile ekuthintweni uma zishiywa elangeni.
IHydro Flask inikeza isivalo ngotshani obuhlanganisiwe bezinguqulo ezingama-32-ounce nama-22-ounce we-tumbler. Sizamile enguqulweni enkulu, futhi iyesabeka: ivikelekile, kulula ukuyisusa futhi uyihlanze, futhi ifakwe into yomlomo eguquguqukayo ye-silicone ukuvimbela ukuthamba kwe-palate okuthambile.
Ekugcineni, sathumela le nkampani nge-imeyili sibuza ukuthi ngabe iphephile yini. Impendulo ithi: “Yize umshini wokuwasha izitsha ungeke uthinte impahla efakwa eflastikini, amazinga okushisa aphakeme kanye nensipho ethile kungashintsha umbala wempuphu. Ngokufanayo, ukucwilisa yonke ingilazi yakho emanzini ashisayo kungashintsha umbala wempuphu. ”
Isikhathi Iposi: Nov-04-2020
Igumbi 503, Shengyue Isakhiwo, No. 227 Tongji Road, Jiangbei District, Ningbo Idolobha, China.